မြင် သူ စွဲ မယ့် ဘော် ဒီ – Grab Love Story
မြင် သူ စွဲ မယ့် ဘော် ဒီ
by phyu July 6, 2021
ဇတ်လမ်းက.. ဒီလိုဗျ…….. ကျွန်တော်က ပထမနှစ်ကျောင်းသားပါ (…)မေဂျာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်နှင့်အခန်းတူတဲ့ သဉ္ဇာကို ကျွန်တော်က အရမ်းကြွေမိပါတေဗျာ။ သူကလည်း အရမ်းကို ပွင့်လင့်သူလေဗျာ။ ကျောင်းကို သူလာရင် ကြွေတဲ့ဘဲတွေကလည်းပရမ်းများတာကိုဗျ။ သူကကျွန်တော့လို ကောင်ကို သိပ်ဂရုမစိုက်ပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်က သူ့ကိုဂရုစိုက်ပြီး သူလိုအင်သမျှကို တတ်နိုင်သမျကြိုးစားပေး၊ အနေနီးတော့ ချစ်သူဖြစ်သွားကြပါတေဗျ။ ဒါပေမဲ့လည်း ငွေကြေးမရှိ ဆင်းရဲတော့လည်း တစ်ခါတစ်ခါ စကားများကြ ရန်ဖြစ်ခဲ့ပါတေဗျ။ သူကကျွန်တော့ကို…. .. အောင်ဇော်..နင်နှင့်ငါပြတ်ပြီ …. ပြောပြီး ပြတ်စဲသွားကြပါတေဗျ………….. ကျွန်တော့အမေနှင့် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေက အားကုန်ပြီး အမျိုးမျိုးဘဲ နှိစ်သိမ့်ပေမဲ့ ကျွန်တော်က သူ့ကိုချစ်မိနေတော့လည်း သူ့ကိုပြန်လိုက်ပြီး တောင်းပန်တော့ ပြန်အဆင်ပြေသွားကြပါတေ၊ အခုလာမဲ့ တနင်္ဂနွေရက်မှာ သူနှင့်အတူ ရုပ်ရှင်သွားဖို့ ပိုက်ဆံလိုလာတော့ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းဖိုးပြည့် ဆီနေ ပိုက်ဆံချေးဖို့ သူ့ဆီကိုဘဲ သွားလိုက်ပါတော့တေဗျ၊ …. ဖိုးပြည့်က ကျွန်တော်နှင့်ငယ်ငယ်ကတည်း အတူတူကျောင်းတက်ပြီးတော့ ကြီးလာကြတာပါ။
သူဆီက အခုငွေချေးရမှာက အကြွေးသစ်ပေါ့ဗျာ၊ ပထမတစ်ကြိမ်ရှိသေးတေဗျ အကြွေးပေးရမှာ ကျွန်တော်က သဉ္ဇာနှင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်လို့ ငွေတစ်သောင်း ချေးထားတာ ၅၀၀၀ဘဲပေးထားတာ၊ အခုတစ်ခါချေးရင်တော့ နှစ်သောင်းခွဲကျော်ပြီပေါ့ဗျာ၊ဒါပေမဲ့လည်းဘဲ ကျွန်တော်က တက္ကသိုလ်တက်ရင်း အလုပ်လုပ်နေသူမို့ လကုန်ရင်တော့ ပြန်ဆပ်နိုင်မှာပါလို့တွေးပြီး သူဆီကို သွားလိုက်ပါတော့တေဗျာ…… သူတို့က သုဝဏ္ဏမြို့နယ်ရဲ့လုံချင်းတိုက်အိမ်ခြံအကျယ်ကြီးနှင့် နေကြတဲ့ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုပါ။ ကျွန်တော်တို့က ၆ လွှာတိုက်ခန်းရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ် ၆ လွှာမှာ နေရတဲ့ပါဗျ၊.. ဆက်အုံးမေဗျာ… သူတို့အိမ်ကို ရောက်သွားတော့ တံခါးဘေးက ခေါင်းလောင်းမြည်တဲ့ ခလုပ်လေးကို နှိပ်မေလို့ ကြံနေတုန်ဘဲ ဖိုးပြည့်က တံခါးဖွင့်ပြီး ထွက်လာကာ ဟာ.. .. ဟျောင်.. အောင်ဇော် ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟ .. သူကမေးလာတော့ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကို…. .. ဟျောင့် ငါစော်ကို ရုပ်ရှင်သွားပြမလို့ကွာ အဲ့ဒါ ခုငါ့မှာ ပိုက်ဆံလိုနေတေ မင်းဆီက လာပြီချေးတာကွ .. ပြောလိုက်တော့ ဖိုးပြည့်က ခဏ္ဏစောင့်ပြေပြီး သူ့ရဲငွေကို အခန်းကယူလာပြီး .. ဟျောင့် မင်းစော်က မဟန်ဘူးနော် မင်းသတိထားပါ .. ပြောပြီးပိုက်ဆံပေးကာ သူက ကျွန်တော့ကိုကြည့်ပြီး အပြင်မသွားခင်မှာ .. ဟျောင့် ငါ့အမေကို ဝင်နုတ်ဆက်သွားအုံး အမေက မင်းကို မေးနေတေဟ .. ပြောတော့ အန်တီဒေဝီကို နုတ်ဆက်ရအောင်ဘဲ အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်ပါတော့တေ… အန်တီဒေဝီဟာ အိနြေ္ဒရှင်မိန့်မပါဘဲ ကျွန်တော်ကိုဆိုရင် သားအရင်းလိုဘဲ ဆက်ဆံတဲ့အန်တီတစ်ယောက်ပါ ၊ သူမက ကံဆိုးရှာပါတေဗျ လင်ယောကျာ်း ဦးထွန်းမောင်က ဖိုးပြည့် ၁၀တန်းမှာ သူ့ကိုကွာရှင်းပြီး သူရဲ့စက္ကထရီကောင်မလေးနှင့် ယူပြီး သူ့ကိုကွာရှင်းကာ သြဇီးကို ထွက်သွားခဲ့ပါတေ။
အဲ့ဦးလေးက ဘာလို့အန်တီလို အရမ်းလှပြီး ကျက်သရေရှိတာကို ပစ်ပြီး သူရဲ့စက္ကထရီမလေးကိုယူပြိး ထွက်သွားမှန်းကို ကျွန်တော်မတွေးတတ်အောင်ပါဘဲဗျာ…….. အန်တီဒေဝီက အချို့သောမင်းသမီးတွေထက်ကို အရမ်းလှတေဗျ။ သူရဲ့ဘော်ဒီက ပြောရမေဆိုရင် နိုင်ငံခြားမင်းသမီးတွေလိုပါဘဲ။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ရွှေဘိုမင်းကြိုက် ဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ ၊ ကျွန်တော်က အန်တီကိုနုတ်ဆက်ပြီး ဖိုးပြည့်ဆီကငွေကို ယူပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တော့တေ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အမေကလည်း ကျွန်တော့ရဲ့စော် သဉ္ဇာကို မကြိုက်ကြောင်းပြောတာပေါ့ဗျာ။ သူက ငွေကိုလူထက် ပိုပြီးခင်တတ်တာကို ပြောကြတော့တေ ၊ ဒါပေမဲ့ ၁၉ နှစ်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်မှာတော့ မစိတ်မွန်းနေတော့လည်း အမေတို့ပြောတာကို နားမဝင်ခဲ့ဘူးလေ၊ သူ့အချစ်ကို ရရှိရေးသာ အရေးကြီးနေတာ၊ သူနှင့်ကြိုက်ပြီး ပြတ်သွားလို့ ပြန်လိုက်ပြီး ရှင်းပြမှ အဆင်ပြေခါစမို့လေ ဟား.. ဟား… ဖိုးပြည့်ဆီက ချေးယူလာတဲ့ငွေ နှစ်သောင်းက သူနှင့်သူ့သူငယ်ချင်းအတွက်ပါ ရုပ်ရှင် လက်မှတ်ဝယ် စားစရာဝယ်ပြီး ၊ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး စားချင်ကိုလိုက်ကျွေးတာနှင့် ကုန်ရော သူတို့နှင့် အဲ့နေပျော်ခဲ့ရပေမဲ့ နောက်နေ့တော့ နောက်တစ်ကောင်ပါသွားရော……… ကျွန်တော်က အလုပ်ကပြန်လာတော့ တန်းတွေ့တာဘဲ ဟိုဘဲက ကားအကောင်းစားစီးပြီး သူနှင့်သွားတာကို မြင်လိုက်တော့……….. .. တောက်… ခွေးမ ငါ့ကိုချစ်တေပြောပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက်နှင့်တွဲနေတေ…. စိတ်ကနေပြောပေမဲ့ စကားက နုတ်ကထွက်မလာဘူး ။
ကျွန်တော့ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ဖိုးပြည့်က ကျွန်တော့ကို…. .. မင်းကို ငါပြောသားဘဲ အဲ့ဟာတွေက အရည်မရအဖတ်မရတာတွေကွ .. သူပြောပြီး ကျွန်တော့ဘက်ကနေပြီး မခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး ဒေါ့သဖြစ်ပြီးဆဲ့တော့တေ ဖိုးပြည့်က ကျွန်တော်နှင့်ငါးတန်းနှစ်ကတည်းက အတူတူတက်ခဲ့ကြသူမို့ ညီအကိုရင်းတွေလို နေကြတာလေ ။သူက ကျွန်တော့ကျော့ကို ပုတ်ပြီး.. .. သူ့ထက်သာသူတွေက အများပါကွှာ သူ့ကိုမေ့ပြီး အခြားတစ်ယောက်ကိုဘဲ ပြောင်းချစ်ကွာ အသည်းခွဲမခံနဲ့ .. ပြောပြီးနှစ်သိမ့်ပေးတော့မှဘဲ ကျွန်တော်ကလည်း သူကို .. အေးကွာ ငါနွားအဖြစ်မခံဘူးကွာ.. လို့ပြောပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတော့တေ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း စိတ်ကိုထိန်းပြီး အိပ်စက်လိုက်ပါတော့တေဗျာ……….. နောက်နေ့အလုပ်ကအပြန်မှာ လစာထုတ်ထားတဲ့ငွေထဲက ငွေနှစ်သောင်းခွဲကို ဖိုးပြည့်ကို ပြန်ဆပ်ဖို့သွားလိုက်ပါတေ ၊ သူ့အိမ်ရောက်တော့ ဖိုးပြည့်က ဂိမ်ဆော့နေတော့ အကြွေးဆပ်ပြီး သူနှင့်အတူ ဂိမ်းထိုင်ဆော့တော့ အန်တီဒေဝီက ကျွန်တော်တို့စားဖို့ မုန်တွေနှင့်ကော်ဖီ လာချပေးပြီး အိမ်ထဲကို ပြန်ဝင်သွားတေ။ အမဲရောင်မှာ အဖြူရောင်ပန်ပွင့်နှင့်ထမိန်က အန်တီရဲ့စွင့်ကားပြီး ခါးသေးကို ပုံဖော်ပေးသလို ဖြစ်နေတော့ သူ့ရဲနောက်ပိုင်းအလှကို ငေးကြည့်မိသွားတေ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဂိမ်းဆော့ပြီး ညနေ ၇ နာရီမှ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတေ……. အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သဉ္ဇာဆီကနေ ဖုန်းဆက်လာတေ။ သူနှင့်အတူ ကလပ်ကို သွားရအောင်ခေါ်တော့ အဝတ်အစားတွေလှပြီး သူ့ဆီကိုသွားပြီး နှစ်ယောက်သား ကလပ်ကိုချီတက်ကြတော့တေ။
ကလပ်မှာ ဘီယာသောက် ကလို့ မောသလို မူးလာတော့ သူကိုခေါ်ပြီး ကလပ်အပေါ်က အခန်းယူပြီး နှစ်သားနမ်းကြရင်း သူ့ကို ကုတင်ဆီကိုခေါ်သွားပြီး သူ့ရဲ့ပန်ရောင်စကတ်တိုလေးကို ချွတ်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်ကိုမချွတ်ပေးဘဲ သူ့ရဲ့ကျန်တဲ့အဝတ်တွေကို ချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ်ကို လှဲစေတေ။ သူ့ရဲ့ နို့လေးတွေကိုစို့ကာ သူ့ညီမလေးကို လက်နှင့်ကစားပေးလိုက်တော့ သူက ညီးသံလေး ထွက်လာတော့တေ ။ သူဆီက ညီးသံလေးက ကျွန်တော့အမည်မဟုတ်ဘဲ ဒေဗစ်ရဲ့အမည်ကို ခေါ်ပြီးညီနေတာ ပထမတော့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကသူ့ကို ကောင်းအောင်ဘဲ ပြုစုနေတော့ မကြားမိဘူးလေ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့အပေါ်က လက်တစ်ဘက် ထောက်ပြီး နောက်တစ်ဘက်နှင့် တင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ညီလေးကိုကိုင်ကာ သူ့ညီမလေးဆီမှာတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းလုပ်ကာ အဆုံးထိသွင်းလိုက်ပါတေ။ သူရဲ့လက်က ကျွန်တော့လည်ပင်းကို ရစ်ပတ်ပြီး နုတ်ခမ်းချင်နမ်းလာပါတော့တေ၊ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့နုတ်ခမ်းကိုနမ်းပြီး အပေါ်ကနေသူ့ကို ဆောင့်ကာလုပ်ပေးတေ၊ သူကနုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေလို့ သူ့ရဲ့ညီသံက ပါးစပ်နှစ်ခုကြားမှာ ပျောက်သွားတော့… * အင့်.. အင့်… * သာ ထွက်နိုင်တေ ၊ ၅ မိနစ် ကြာလုပ်ပြီး သူအရမ်းကောင်းပြီး ပြီးချင်လာတော့မှ သူ့နုတ်ကနေ .. ဒေ့ဗစ်…အား…လုပ်..လုပ်ပါ.. မြန်မြန်လုပ်ပေးပါ ဒို့ပြီးတော့မယ် .. လို့ သူ့နုတ်ကနေထွက်လာတော့ ကျွန်တော်ကြားပြီး ဒေါသတွေထွက်ကာ သူ့နို့ကိုကိုင်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်ကာ မညှာတမ်းလုပ်လိုက်တော့ သူပြီးသွားတေ၊
ကျွန်တော်မပြီးသေးတော့ သူကိုလေးဘက်ထောက်အနေအထားပြောင်းပြီး သူ့ကိုအနောက်ကနေ သူ့ရဲတင်ပါးကို ရိုက်ရိုက်ကာ မညှာဘဲ ကြမ်းကြမ်း လုပ်ကာပြီးသွားပါတော့တေ.. သူ့အပေါ်ကနေ မှောက်ချပြီး အမောဖြေကာ အမောပြေမှ သူ့ကိုမေးလိုက်တော့တေ…. .. ခွေးမ ငါလုပ်နေတာဟ.. နင်က ဒေဗစ်လုပ်တေလို့ စိတ်နှင့်မှတ်ရုံမကဘဲ နုတ်ကနေ ဒေ့ဗစ်အမည်ကိုပါ ရွက်လိုက်သေးတေပေါ့..တောက်….. သူ့ကိုပြောပြီး သူ့အဝတ်အစားတွေကို သူ့ဆီကို ပြစ်ပေးလိုက်ပြီး ကျွန်တော်လည်း အဝတ်အစားတွေကို ပြန်ဝတ်ကာ သူ့နှင့်အတူ အခန်းကပြန်ထွက်လာကြပြီး သူ့ကို အိမ်ကိုပို့ပြီ ပြန်လာခဲ့တေ၊ အဲ့နေကတည်းက သူ့ကို ဒေါသဖြစ်ပြီး အမုန်းကြီးမုန်းပြီး သူ့ကို အဆက်မလုပ်တော့ဘဲ နေလိုက်တော့တေ ၊…. ကျွန်တော်မှာ သဉ္ဇာနှင့်သွားတော့ သုံးစရာ ပိုက်ဆံပြတ်တော အိမ်ကအမေလည်း အဖေအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြို့ကို လိုက်သွားတေ၊ ကြံရာမရတဲ့အဆုံးမှာ ဖိုးပြည့်ဆီကို ပိုက်ဆံသွားချေးတော့ သူက စော်နှင့်ငပလီကို သွားမှာမို့ သူ့အမေဆီကဘဲ ချေးပါ ပြောပြီး သူ့ရဲ့အထုတ်တွေနှင့်အတူ ကားလေးနှင့် ထွက်သွားတော့တေ။ ဖိုးပြည့်တို့အိမ်မှာ အလှပန်းပင်တွေကို ရောင်းတာဆိုတော့ အန်တီဒေဝီက ပန်းခြံမှာဘဲ ရှိမှာဘဲ တွေးပြီး သွားလိုက်တော့ ။
အဝါရောင်မှာပန်းပွင့်အဖြူရောင်လေးတွေပါတဲ့ ဝမ်းဆပ်ကိုဝတ်ကာ ပန်းပင်တွေကို လိုက်ကြည့်နေတာကို နောက်ကနေ သူ့ရဲ့အလှကို ခံစားနေတော့ အန်တီကလှည့်လာပြီး သူက .. သားအောင်ဇော်လာလေကွယ် အန်တီကို ဒီပန်အိုးလေးကို ရွှေ့ပေးပါ .. ပြောတော့ ပန်အိုးကို ရွှေပေးလိုက်တေ ။ပြီးသွားတော့ အန်တီက အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီး .. အိမ်ထဲကိုလိုက်ခဲ့ကွယ် အန်တီအအေးတိုက်ပါ့မေ .. ပြောပြီး သူအရှေ့ကထွက်သွားတေ၊ အနောက်ကနေ သူရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကို မြင်လိုက်တော မသိတဲ့သူတွေဆိုရင် အန်တီဒေဝီက အပျိုကြီးဘဲထင်ကြမှာ လမ်းလျှောက်တိုင်းတုံတုံပြီး တင်ပါးလှလှတွေက မြင်ရသူတွေကို ဘလောင်ဆူစေတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်းဘေးက နှင်းဆီပန်းပင်က နှင်းဆီအနီရောင်တစ်ပွင့်ကို ခူးပြီး အနောက်မှာဝှက်ကာ အထဲကိုလိုက်ကာ ဝင်သွားပါတော့တေ ၊အထဲရောက်တော့ အန်တီက အအေးနှစ်ခွက်ကို ချထားပြီး ထိုင်နေတော့ သူ့ဆီသွားပြီး နှင်းဆီပန်းပေးတော့ သူ့ကပြုံးပြီး .. ကျေးဇူးပါကွယ် အန်တီကို ဒီလိုပန်းပေးမဲ့သူ မရှိတာကြာလှပေါ့ကွယ် .. ပြောလာတော့ ၊ ကျွန်တော်က သူ့ကို.. .. အန်တီကို ပန်းပေးချင်သူ အနီးမှာ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာ အန်တီက မသိလို့ပါဗျာ .. လို့ပြောလိုက်ကာ အန်တီကိုပေးမဲ့ပန်းကို မပေးသေးဘဲ သူ့ကိုခွင့်တောင်းကာ… .. အန်တီကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပန်ပေးချင်ပါတေ .. လို့ပြောလိုက်တော့ သူက ခေါင်ညှိတ်ပြပြီး သဘောတူပါတေ ၊ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာ ပန်းပွင့်ကို ပန်ပေးလိုက်တော့ အန်တီလက်က တုန်ရီစွာနှင့် ကျွန်တော့ရဲ့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး… .. ကျေးဇူးတင်ပါတေ သားရယ်…. ပြောပါတေ။ အန်တီကိုယ်အနောက်ကနေ ကိုယ်ကိုကိုင်းပြီး ပန်ပေးတော့ သူ့ဆီကနေ မွေးရနံ့နှင့်အတူ သူ့ရဲ့နို့ကြီးတွေကို မြင်နေရတော့ ညီလေးက ခေါင်းထောင်ချင်နေပြီ နုညံ့သောသူ့လက်က ကျွန်တော့လက်ကို ဆုပ်ကိုင်တော့ ညီလေးက တင်းပြီးခေါင်းက ၉၀ ဒဂရီ မတ်နေတော့တေ ။
အန်တီကရပ်ပြီး ပြန်လည့်လာပြီး ကျွန်တော့ကိုဖက်လိုက်တေ။ထောင်မတ်နေတဲ့ညီလေးက သူ့ရဲညီမလေးကို ထောက်ထားတော့ အန်တီက.. .. အိုး…. သားရယ်…… လို့ပြောပြီး တင်းတင်းဖက်ထားပါတောတေ၊ ကျွန်တော်လည်း စိတ်လွတ်ပြီး အန်တီကို နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလိုက်တော့ သူကလျှာလေးကိုသွင်းပြီး တုံပြန်လာခဲ့တေ၊ ၁ မိနစ်ကြာ အနမ်းရှည်ပေးပြီး ရပ်လိုက်တော အန်တီမျက်လုံးလေး မှေးပြီး အန်တီက .. သားရယ်.. အပြင်မှာ မကောင်းဘူးကွယ် .. ပြောလာပါတော့တေ၊ ကျွန်တော်လည်း သူလက်ကိုဆွဲပြီး အန်တီအိပ်တဲ့အခန်းကို ခေါ်သွားကာ အခန်ကိုရောက်တာနှင့် အန်တီကိုထပ်ပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလိုက်ကာ အိပ်ကုတင်းအနီးကို ခေါ်သွားပြီး သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပေးပြီး ကုတင်ပေါ် ဖြေးဖြေးလေးလှဲချလိုက်ကာ သူ့ကိုမျက်နှာက နေစပြီး နမ်းကာ တဆင့်ချင်းဆင်းလာပြီး သူ့ရဲ့နို့ကိုစို့ပေးပြီး သူ့ရဲ့ညီမလေးကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အမွေးလေးတွေကို ပွတ်သပ်ပြီး ကစားပေးကာ ၁မိနစ်လောက်လုပ်ပေးလိုက်ပါတေ၊ သူ့ညီမလေးက ၈ နှစ်လောက် အသုံးမပြုဘဲထားလို့ နုတ်ခမ်းလေးနှစ်ခုက စေးကပ်နေတော့ လက်နှင့်အသာလေးဖြဲကာ လျှာဖျားလေးနှင့် ကစားပေးလိုက်တော့ အန်တီက… .. အား…. သားရယ်…. ဘယ်လိုများ..လုပ်နေတာလဲကွယ်… အန်တီမနေတတ်တော့ဘူးကွယ်…. အား… လုပ်ပါတော့ကွယ်….
အန်တီကတောင်းဆိုလာတော့မှ သူညီမလေးဆီက ခွာကာ ကျွန်တော့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး သူ့အပေါ်ကနေမှောက်ချလိုက်တော့ သူ့လက်က ညီလေးကိုကိုင်ကာ သူ့ရဲ့ ညီမလေးနှင့်တေ့ပြီး နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းလာတေ ၊ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုနုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပြီး ခါးကိုအားပြုပြီး ညီလေးကို ဆောင့်သွင်းလိုက်ပါတော့တေ… .. အား… သားရယ်..ဖြေးဖြေးကွယ်.. အန်တီ မလုပ်တာကြာပြီကွယ်..အား…… ကျွန်တော်လည်း သူပြောသလိုဘဲ ဖြေးဖြေးလုပ်ပြီး သူ့နုတ်ခမ်းကို နမ်းပေးလိုက်ပါတေ.. သူ့ကို ၅မိနစ်ကြာလေး လုပ်လိုက်တော့ သူကအောက်ကနေပြီး ညီလေးဆောင်ချက်နှင့်အညီ လှုပ်ရှားပေးလာပြီး အန်တီက .. သားရယ်…အား… မြန်မြန်…အား… လုပ်ပေးပါကွယ်.. အာ… အန်တီ..အား.. ပြီးချင်လာပြီကွယ်..အား……. ပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းကို ပခုံးပေါ်တင်ပြီး မြန်မြန်ဘဲ ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ ၃ မိနစ်အကြာမှာ အန်တီပြီးသွားတေ၊ ကျွန်တော်လည်း ပြီးချင်လာတာမို့ သူကိုအသိပေးလိုက်တေ .. အား… အန်တီ.. ကျွန်တော် ပြီးတော့မယ် အား……. .. ပြီးလိုက်သား.. အန်တီအထဲမှာပြီးလိုက်..အား.. .. ကျွန်တော်လည်း သဉ္ဇာနှင့်လုပ်ပြီး နှစ်ပတ်ကြာသိမ်းထားတဲ့ အချစ်ရည်တွေကို အန်တီညီမလေးအထဲမှာ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တေ…. အန်တီအပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်တော့ လက်နှစ်ဘက်နှင့်ဆီကြိုပြီး တင်းတင်းလေး ပွေ့ဖက်ထားပြီး ပါးနှင့်နဖူးတွေကိုနမ်းပြီး အန်တီက လှိုက်မောသံလေးနှင့်.. .. အများကြီးဘဲကွယ်.. ဘယ်ကတည်းက စုထားတာလဲဟင်…. .. အရမ်းကြာပါပြီ အန်တီ .. လို့ ပြောလိုက်ပါတော့တေ..၊
သဉ္ဇာထက်ကို အန်တီက ပိုပြီးကြပ်နေတေ သဉ္ဇာက ဒေဗစ်နှင့်လည်း လုပ်နေလို့ အန်တီလောက်ကို ကြပ်တည်းမူ မရှိတော့ဘူးဗျ၊ အန်တီက ကျွန်တော့ကို တင်းတင်းဖက်ထားပြီး .. သားနှင့်အန်တီ ဒီလိုဖြစ်တာကို သားသူငယ်ချင်း မသိစေနဲ့ကွယ် .. ပြောတော့ ခေါင်းညှိတ်ကာ မပြောပါဘူးလို့ အန်တီကို မျက်လုံချင်းစိုက်ကြည့်ပြီး အဖြေပေးလိုက်တော့ အန်တီက ကျွန်တော့ကို နုတ်ခမ်းချင်းနမ်းကာ အနမ်းရှည် ပေးလိုက်ပြီး သူက တင်းတင်းဖက်ထားပါတော့တေဗျာ.. အမောပြေတော့ အန်တီအပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တော့ အန်တီကသူ့ရဲ့ညီမလေးကို လက်နှင့်ကာပြီး ရေချိုးခန်းကိုဝင်သွားတော့ အနောက်ကနေ အန်တီဒေဝီရဲ့ဘော်ဒီကို ကြည့်ရင်း အနောက်ကနေလိုက်သွားပါတေ။ အန်တီက သူ့ညီမလေးကို ဆေးကြောပြီး ကျွန်တော့ကိုကြည့်ကာ… .. သားမြင်လား အများကြီးဘဲ သားရဲ့အချစ်ရည်တွေလေ .. လို့ပြောပြီး သူဆေးပြီးတော့ ကျွန်တော့ကို ဆွဲပြီး ကျွန်တော့ညီလေးကိုလည်း ဆပ်ပြာနှင့် ကြင်နာစွာနှင့် ဆေးကြောပေးပါတေ၊ ရေအေးနှင့်ဆေးကြောပေမဲ့လည်း နုညံ့တဲ့သူ့လက်နှင့် ထိတွေနေတော့လည်း တဖန်ပြန်ပြီး ညီလေးကခေါင်းထောင်လာတော့ အန်တီက .. သန်လိုက်တာ သားရယ်..ပြန်ပြီးခေါင်းထောင်လာပြန်ပြီကွယ်.. ပြောပြီး ညီလေးကို သူ့ရဲ့ပါးစပ်နှင့်စတင်ကာ လုပ်ပေးပါတော့တေ ၊ ကျွန်တော့ရဲ့ရည်းစား သဉ္ဇာတောင် တစ်ခါမှပါးစပ်နှင့် မလုပ်ပေးဘူး အခုအန်တီက ညီလေးကိုလျှာဖျားလေးနှင့် ညီလေးရဲ့အကွဲကြောင်းလေးကို ကစာပေးပြီး ညီလေးတစ်ဝက်ကို ငုံထားတော့ စဉ်းစိမ်က ယစ်မူးစွာနှင့် အန်တီဒေဝီရဲ့ ဆံထုံးကိုကိုင်ပြီး ဖြေးဖြေးလေးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးမိတေ။
ကျွန်တော်လည်း ပြီးချင်လာတာမို့ အန်တီကို ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်လို့ အသိပေးလိုက်တော့ အန်တီကညီလေးကို ပါးစပ်က မထုတ်ဘဲ လက်နှင့်ဂွင်းမြန်မြန်တိုက်ပေးပြီး ပါးစပ်ထဲမှာဘဲ ပြီးစေပါတော့တေ။ .. အား… အန်တီရယ်… ကျွန်တော် ပြီးပြီ… အား……. အန်တီက ညီလေးဆီက အချစ်ရည်တွေပန်းတာကို မထွေးထုတ်ဘဲ ကုန်စင်သွားမှ အားလုံးကို မျိုချလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း အားနာသွားတာကို မြင်တော့ အန်တီက…. .. သားရယ်… အန်တီက သားကို ချစ်နေတာကြာပြီကွယ်… အန်တီက အကြီးမို့ သားကို စပြီးမြူမဆွယ်ချင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့သားက အန်တီကိုပန်းပန်ပေးတော့ အန်တီလည်း စိတ်မထိန်းတော့တာပေါ့ ပြီးတော့ သားကိုချစ်လို့ သားရဲ့အချစ်ရည်ကို အန်တီသောက်တာ ပြစ်လိုက်ရမှာ နှမျောလို့ပေါ့ကွယ်….. သူကပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ဆွဲထူပြီး ကုတင်ပေါ်ကို သူ့ကိုယ်ကို ချီပြီးယူသွားတေ၊ ကုတင်ပေါ်မှာ ကြင်နာစွာ မျက်လုံးချင်းကြည့်ပြီး ချပေးပြီး သူ့ရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးကိုနမ်းလိုက်တေ။
သူရဲ့ညီမလေးကိုနမ်းတော့ သူကအနမ်းမခံပေမဲ့ သူ့လက်တွေဖယ်ပြီး သူ့ကိုကျွန်တော့ရဲ့ပါးစပ်မှာ ပြီးစေပြီးမှ ခေါင်ထောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ညီလေးကို အန်တီ ဒေဝီရဲညီမလေးဆီမှာ တေ့ပြီး ဖြေးဖြေး သွင်းပြီး အဆုံးထိရောက်သွားမှ သူ့ကိုနမ်းကာ ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန် ဖြေးဖြေးလေးဘဲလုပ်ပါတော့တေ၊ ၁၀ မိနစ်ကြာတော့မှ အန်တီက ကျွန်တော့ကိုတင်းတင်းဖက်ပြီး .. သား… အန်တီ..ပြီးချင်လာပြီကွယ်….သားရယ်…အား….. သူပြောလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ထူပေးဘဲ လေးဘက်ထောက်အနေအထားပြင်ပေးပြီး သူ့အနောက်ကနေ မြန်မြန်ဆောင့်လုပ်ပေးလိုက်တော့ အန်တီပြီးသွားပါတေ၊ အန်တီပြီးလို့ နောက်တစ်မိနစ်ဆောင့်လုပ်ကာ က်ျန်တော်လည်း ပြီးသွားပါတေ။… ကျွန်တော်ရည်းစားမတွေ့အချိန်တွေမှာ အန်တီနှင့်အတူရှိနေပြီး မိန့်မရသွားရင်တောင်မှ ကျွန်တော်ဟာ အန်တီနှင့်ချစ်တာကို ရပ်စဲနိုင်မေ မထင်ပါဘူးဗျာ၊ ခိုးစားနေကြတာလို့ ပြောရင်လည်းပြောကြပါဗျာ ၊ ကျွန်တော်က အန်တီကိုလက်ထပ်ယူချင်ပေမဲ့ အန်တီက လက်မခံဘူး ၊ သူက ကျွန်တော့ကို သူ့လိုအမေအရွယ်ကို မယူစေချင်ပါဘူး ယူမေလို့ ပြောခဲ့သည်ရှိသော် သူ့ကိုနောက်ထပ်တွေ့ခွင့် မပြုဘူးလို့ ပြောလာလို့ပေါ့ဗျာ၊ ကျွန်တော်က အန်တီကို တကယ်ချစ်မိသွားပါတေ ၊ အန်တီမဟုတ်ရင် ဘယ်ရည်းစား ဘယ်မိန်မကိုမှ ကျွန်တော်မယူချင်တော့ဘူးဗျာ…..။ ။….ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးတာကို….ကျေးဇူးပါဗျ
ငယ် ငယ် က လုပ် ဖော် ကိုင် ဖက်